Izindaba - Imakethe yaphansi yepulasitiki inekusasa eliqhakazile
Imakethe yaphansi yepulasitiki inekusasa eliqhakazile
Iphansi lePulasitiki njengamanje liyinto entsha yobuchwepheshe obusezingeni eliphakeme yokuvikela imvelo ezintweni zokwakha zomhlaba. Selokhu kwethulwa ifulethi lepulasitiki ezweni lethu, sekuphele iminyaka emihlanu noma eyisithupha yentuthuko. Kulindeleke ukuthi iminyaka embalwa ezayo izongena enkathini yentuthuko esheshayo.
Isitezi sepulasitiki njengamanje siyinto entsha enobuchwepheshe obuphakeme obuluhlaza okwemvelo ezintweni zokwakha zomhlaba. Isetshenziswe kabanzi kumaphrojekthi wokuhlobisa angaphandle. Manje ezentengiselwano (enxanxatheleni yezitolo, ezakhiweni zamahhovisi, ezikhumulweni zezindiza, eziteshini), kwezemfundo (ezikoleni, ezinkulisa, ezikhungweni zokuvivinya umzimba, emitatsheni yezincwadi), eMedicine (ezibhedlela, emafemini ezokwenza imithi), izimboni nezinye izimboni zisetshenziswa kabanzi, futhi zithole imiphumela egculisayo, inani ukusetshenziswa kuyanda usuku nosuku. Ukuthuthuka kwayo ngokushesha akukhona nje kuphela ukubhekelwa kokuvikelwa kwemvelo nokuvikelwa kwemvelo, kepha futhi nokwenziwa ngcono kobuchwepheshe bokukhiqiza, ikhwalithi yomkhiqizo, nempilo yesevisi enqubweni yokukhiqiza yemikhiqizo yepulasitiki. Lokhu kufanele futhi kube ngenxa yokuthuthuka okuluhlaza kwamapulasitiki. Okushoyo.
Ucwaningo lwemakethe kanye nombiko wokuhlaziywa komkhakha wepulasitiki okhombisa ukuthi kunezinhlobo ezintathu zephansi le-PVC: i-PVC yaphansi, i-PVC sheet flooring, ne-PVC sheet flooring. Umthamo wokukhiqiza weplastiki we-PVC cishe amamitha ayizigidi ezi-2. Ngo-2016, ikhiqize ngokuyisisekelo ukukhiqizwa nokuthengiswa okugcwele. Ngemuva kokuthuthuka kwezimakethe ngo-2015, amazinga aseYurophu namazinga aseMelika aseqede isitifiketi ngokuyisisekelo. Ngokuvikelwa okuhle kwemvelo, ikakhulu ithatha indawo yezinhlanganisela eziphakathi kokuya phezulu. Ukubeka phansi, imikhiqizo yamanje ihlose ukuthekelisa kakhulu.
Ngokuthuthuka kobuchwepheshe bokukhiqiza kanye nokwenza kahle inqubo, i-plastic flooring isibe yingcweti yezinzuzo zokusebenza. Okusho ukuthi, izinzuzo zaphansi kwepulasitiki ngokuzayo zizoqhubeka ngokuya zanda. Izinzuzo zezinto zokuhlobisa zigxilwe ndawonye.
Kulezi zinsuku, iphansi lepulasitiki luhlobo lwezinto eziphansi zobuchwepheshe eziluhlaza futhi ezinobungani bemvelo. Inhlangano eyaziwayo yasekhaya yokuhlaziya nokuhlola yasekhaya ithe izonikeza ukudlala okuphelele kubuchwepheshe bokuhlaziya obuphambili ukuhlinzeka ngesiqinisekiso esiphephile nesithembekile sekhwalithi nokuphepha kwepulasitiki. Umgwaqo omusha.
Isikhathi seposi: 04-06-21